သူတို့ မငျးအနားက ထှကျသှားလို့ တဈယောကျထဲကနျြခဲ့ရတယျဆိုပွီး ဝမျးနညျးနတောလား - YATHAZONE
သူတို့အနားမှာရှိ့တော့ရော မငျးအပျေါမှာ မငျး ကောငျးပေးသလောကျ သူတို့ပွနျကောငျးပေးခဲ့လို့လား မငျးအပျေါမကောငျးတဲ့သူတှနေဲ့
အ တူ နေ ရ တာ နဲ့ စာ ရငျ တဈယောကျထဲနရေတာက ပိုပွီးလှတျလပျတယျ.” သူတို့ မငျးကို မခဈြတော့လို့ ခံစားနရေတာလား တျောစမျးပါကှာ… အခဈြက ဘဝမဟုတျဘူး ။
သူတို့ ပါးစပျက ခဈြပါတယျဆိုတဲ့ စကားလေးတဈခှနျးကွားရဖို့အရေး မငျးဘဝမှာ ဘာတှဘေယျလောကျထိ့ ပေးဆပျခဲ့ရပွီးပွီလဲ….. မွဲမွဲ မှတျထားပါ လူတခြို့ဟာ…. မငျးကိုအသုံးခလြို့ဝသှားပွီးဆိုရငျ မငျးကဘဲ သူတို့အပျေါမှာ အမှားကွီးကြူးလှနျခဲ့သလိုမြိုးပုံစံတှနေဲ့ မငျးအနားကတဖွေးဖွေး ထှကျခှာသှ့ားကွလိမျ့မယျ…. စဉျးစားပါ….?
တဈကွိမျလောကျ ပြျောရှငျရဖို့အရေး အကွိမျတရာမက ငိုကွှေးပေးခဲ့ရတာတှေ မ မေ့ သေး ဘူး လား.. တဈခါလောကျ အခဈြခံရဖို့အရေး အခါတရာမက မကျြစောငျး အထိုးခံခဲ့ရတာတှေ မ မေ့ သေး ဘူး လား.. ခဏလောကျ ဘဝထဲအလညျလာဖူးရုံနဲ့ သံသရာထိ မငျးနဲ့အတူရှိပေးမယျလို့ထငျနလေား ကိုယျက ဘယျလောကျခဈြခဈြ သူ ပဈ ခငျြ ပဈ မှာ ဘဲ သူက ကိုယျမှမဟုတျတာ”
မနခေငျြလို့ ထှကျသှားတဲ့သူတှကေို အတငျး လိုကျမတားနဲ့” မလာခငျြလို့ ပွနျမလာတဲ့သူတှကေို အတငျး လိုကျမချေါနဲ့”
ကိုယျ့ကို မရှိစခေငျြတဲ့ ဘဝထဲကိုအရှကျမရှိအတငျး လိုကျမတိုးဝငျနဲ့”
ကိုယျဆကျတဲ့ဖုနျးလေးတောငျ မကိုငျခငျြတော့တဲ့ သူတှကေို မဆကျသှယျပါနဲ့တော့”
ကိုယျ့စီမှာမပြျောဘူး ထငျတဲ့သူတှကေို လှတျလပျခှငျ့ပေးလိုကျပါ”
သူတောငျနနေိငျသေးတာဘဲ အဲ့ဒါကို ကိုယျက မနနေိငျ မထိုငျနိငျဖွဈနရေငျ ဒီလူ ငါဒီလိုလုပျလညျး ရတာဘဲ ဆိုပွီး ပိုနိုငျစားလာလိမျ့မယျ….. သူတဈပါးကို ဂရုစိုကျလှနျးပွီး ကို့ယျကိုကိုယျ ဂရုစိုကျဖို့ မနေ့တောမြိုးတှေ ရပျသငျ့ပွီး ရှဆေ့ကျလြှောကျလှမျးရမယျ ဘဝတှမှော ကို့ယျအတှကျ ကိုယျရှိနဖေို့လိုအပျတယျ မဟုတျလား……..?
ဖွပေါကှာ……… သူသာ မငျးကိုတကယျခဈြရငျ မငျးနဲ့ဝေးရမဲ့လမျးကို ဘယျရှေးမလဲ…? ဖူးစာမှားကွီးကို စှဲလနျးနလေို့လဲ နာကငျြသူ ကိုဘဲ ဖွဈနမှောလေ
တဈခြိနျခြိနျမှာ မငျးအတှကျ စဈမှနျတဲ့ဖူးစာဆိုတာ ရှိ့လာနိုငျသေးတာဘဲ ဒါကွောငျ့……… ဆကျရနျရှိသေးတဲ့ ဘဝရဲ့ လကျကနျြအခြိနျလေးတှမှော
ကိုယျ့အပျေါတကယျခဈြတဲ့သူတှအေတှကျဘဲ ကိုယျရဲ့ ပေးဆပျမူ့တှခေရြငျးပါ….
ကိုယျအတှကျ အသငျ့ရှိနသေူတှအေတှကျဘဲ ကိုယျအခြိနျတှေ ပုံအောပါ….
ပထမ က… မငျးကနျြးမာနဖေို့…….
တတိယ က…မငျးကိုခဈြတဲ့ မငျးမိဘ မောငျနှမတှအေတှကျ မငျးရှိနဖေို့ မဟုတျလား…… ကိုယျ့ ရဲ့ ပေး ဆပျ မူ့ တှေ နဲ့ မ ထိုကျ တနျ တဲ့ သူ တှေ ရဲ့ အခွားတဈဖတျမှာ…. နတေကျအောငျ နပေါ…..”
သူတို့ မင်းအနားက ထွက်သွားလို့ တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းနေတာလား
သူတို့အနားမှာရှိ့တော့ရော မင်းအပေါ်မှာ မင်း ကောင်းပေးသလောက် သူတို့ပြန်ကောင်းပေးခဲ့လို့လား မင်းအပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့
အ တူ နေ ရ တာ နဲ့ စာ ရင် တစ်ယောက်ထဲနေရတာက ပိုပြီးလွတ်လပ်တယ်.” သူတို့ မင်းကို မချစ်တော့လို့ ခံစားနေရတာလား တော်စမ်းပါကွာ… အချစ်က ဘဝမဟုတ်ဘူး ။
သူတို့ ပါးစပ်က ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကြားရဖို့အရေး မင်းဘဝမှာ ဘာတွေဘယ်လောက်ထိ့ ပေးဆပ်ခဲ့ရပြီးပြီလဲ….. မြဲမြဲ မှတ်ထားပါ လူတချို့ဟာ…. မင်းကိုအသုံးချလို့ဝသွားပြီးဆိုရင် မင်းကဘဲ သူတို့အပေါ်မှာ အမှားကြီးကျူးလွန်ခဲ့သလိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့ မင်းအနားကတဖြေးဖြေး ထွက်ခွာသွ့ားကြလိမ့်မယ်…. စဉ်းစားပါ….?
တစ်ကြိမ်လောက် ပျော်ရွှင်ရဖို့အရေး အကြိမ်တရာမက ငိုကြွေးပေးခဲ့ရတာတွေ မ မေ့ သေး ဘူး လား.. တစ်ခါလောက် အချစ်ခံရဖို့အရေး အခါတရာမက မျက်စောင်း အထိုးခံခဲ့ရတာတွေ မ မေ့ သေး ဘူး လား.. ခဏလောက် ဘဝထဲအလည်လာဖူးရုံနဲ့ သံသရာထိ မင်းနဲ့အတူရှိပေးမယ်လို့ထင်နေလား ကိုယ်က ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် သူ ပစ် ချင် ပစ် မှာ ဘဲ သူက ကိုယ်မှမဟုတ်တာ”
မနေချင်လို့ ထွက်သွားတဲ့သူတွေကို အတင်း လိုက်မတားနဲ့” မလာချင်လို့ ပြန်မလာတဲ့သူတွေကို အတင်း လိုက်မခေါ်နဲ့”
ကိုယ့်ကို မရှိစေချင်တဲ့ ဘဝထဲကိုအရှက်မရှိအတင်း လိုက်မတိုးဝင်နဲ့”
ကိုယ်ဆက်တဲ့ဖုန်းလေးတောင် မကိုင်ချင်တော့တဲ့ သူတွေကို မဆက်သွယ်ပါနဲ့တော့”
ကိုယ့်စီမှာမပျော်ဘူး ထင်တဲ့သူတွေကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ”
သူတောင်နေနိင်သေးတာဘဲ အဲ့ဒါကို ကိုယ်က မနေနိင် မထိုင်နိင်ဖြစ်နေရင် ဒီလူ ငါဒီလိုလုပ်လည်း ရတာဘဲ ဆိုပြီး ပိုနိုင်စားလာလိမ့်မယ်….. သူတစ်ပါးကို ဂရုစိုက်လွန်းပြီး ကို့ယ်ကိုကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတာမျိုးတွေ ရပ်သင့်ပြီး ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ် ဘဝတွေမှာ ကို့ယ်အတွက် ကိုယ်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား……..?
ဖြေပါကွာ……… သူသာ မင်းကိုတကယ်ချစ်ရင် မင်းနဲ့ဝေးရမဲ့လမ်းကို ဘယ်ရွေးမလဲ…? ဖူးစာမှားကြီးကို စွဲလန်းနေလို့လဲ နာကျင်သူ ကိုဘဲ ဖြစ်နေမှာလေ
တစ်ချိန်ချိန်မှာ မင်းအတွက် စစ်မှန်တဲ့ဖူးစာဆိုတာ ရှိ့လာနိုင်သေးတာဘဲ ဒါကြောင့်……… ဆက်ရန်ရှိသေးတဲ့ ဘဝရဲ့ လက်ကျန်အချိန်လေးတွေမှာ
ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဘဲ ကိုယ်ရဲ့ ပေးဆပ်မူ့တွေချရင်းပါ….
ကိုယ်အတွက် အသင့်ရှိနေသူတွေအတွက်ဘဲ ကိုယ်အချိန်တွေ ပုံအောပါ….
ပထမ က… မင်းကျန်းမာနေဖို့…….
တတိယ က…မင်းကိုချစ်တဲ့ မင်းမိဘ မောင်နှမတွေအတွက် မင်းရှိနေဖို့ မဟုတ်လား…… ကိုယ့် ရဲ့ ပေး ဆပ် မူ့ တွေ နဲ့ မ ထိုက် တန် တဲ့ သူ တွေ ရဲ့ အခြားတစ်ဖတ်မှာ…. နေတက်အောင် နေပါ…..”
Total Users : 262879
Total views : 716747